Inona no jerena ao an-tanànan'i Trieste any Italia | Vaovao momba ny dia
Trieste dia tanàna tsy manam-paharoa, izay any amin'ny faritra avaratr'i Italia, manatrika ny Ranomasina Adriatika sy ny sisin-tanin'i Slovenia. Io no renivohitry ny faritra Fruili-Venezia Giulia. Ity tanàna ity dia vilany misy kolontsaina maro karazana, satria any Italia izy, somary miala an'i Slovenia ary anisan'ny fanjakana Austro-hongroà. Na dia mbola tsy mahasoroka ny lazan'ny tanàna italianina hafa aza izy io dia toerana mendrika jerena.
Ity iray ity tanàna dia notsidihin'ny olona maro toa an'i James Joyce na Ernest Hemingway. Tanàna mahafinaritra izy izay toa manentana ny fanahy sy mankafy ny toetr'andro, raha tsy rehefa mitsoka ny bora malaza, rivotra mahery izay miseho im-betsaka fotsiny isan-taona. Hahafantatra bebe kokoa momba ity tanàna mampiavaka an'i Trieste ity isika.
2 Kianja Unit
4 Teatra romana
5 Kafe antitra manan-tantara ao Trieste
6 Tranombakoka Trieste
Ity lapa tsara tarehy ity dia naorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary miorina amin'ny toerana tsara tarehy, manatrika ny Ranomasina Adriatika. Ity lapa ity dia natsangana ho an'ny Archduke Maximilian avy any Hasburg sy ny vadiny Charlotte avy any Belzika. Toa misy ny angano fa izay mandany fotoana lava ao anatin'ny rindriny dia hiafara amin'ny fahafatesany alohan'ny fotoana toy ny Archduke. Na izany na tsy izany, dia hitsidika kely fotsiny isika amin'ity tranga ity, na dia tsy afaka mahita an'io toerana mahafinaritra io aza isika. Ny lokon'ny vato dia mifanohitra amin'ny maitso amin'ny saha manodidina sy ny manga ao amin'ny ranomasina, satria ao anaty enclave mety tsara izy io. Raha te hahita azy ao anaty ianao dia tsy maintsy mandoa fidirana, fa ambonin'ireo zaridaina rehetra ary mendrika ny fomba fijerin'izy ireo.
Efa eo afovoan'i Trieste isika dia afaka mankany Piazza della Unità, ilay toerana afovoany indrindra. Eto amin'ity kianja malalaka sy tsara tarehy ity isika dia afaka mahita lapa sasany toa ny Lapan'ny kaominaly, lapan'ny governemanta, lapan'i Pitteri, trano Stratti ary lapan'ny Modello ankoatry ny hafa. Ireo trano rehetra ireo dia manome an'ity kianja ity ho fomba kanto sy tsy manam-paharoa. Ao amin'ny Palazzo Stratti dia afaka mahita ny iray amin'ireo kafe mahazatra indrindra amin'ity tanàna ity isika, izay misy ihany koa ireo mahaliana. Amin'ny làlana akaiky sasany dia ho hitantsika ihany koa ny biraon'ny fizahantany ahafahanao mahazo fampahalalana bebe kokoa momba ireo toerana mahaliana ao Trieste. Misy kianja hafa azo tsidihina ao an-tanàna toa an'i Plaza de la Borsa na Plaza Goldini, na dia tsy dia manandanja loatra toa an'io aza izy ireo.
Ara-dalàna raha mitsidika tanàna iray isika dia te hahita ny faritra misy azy, ny toerana tena izy. Eny, ao Trieste ity faritra ity dia San Giusto. Amin'ity faritra ity dia ahitantsika ny katedraly ao an-tanàna, tamin'ny taonjato faha-XNUMX, miaraka amina varavarankely raozy fotsy mampiavaka ny façade. Eo akaikin'ny katedraly ny Castillo de San Giusto, ao anaty enclave mety tsara amin'ny fomba fijeriny. Androany izy io dia ampiasaina ho toerana fampirantiana miaraka amin'ny tranombakoka sy tranombakoka.
Manerana an'i Italia dia afaka mahita toerana an'ny Fanjakana Romanina ianao, izay naharitra taonjato maro ary nanitatra tokoa. Amin'ny Tsy hahita an'io teatra romana io i Trieste tamin'ny taonjato voalohany AD. C. hatramin'ny taonjato faha-XNUMX, noho ny fihadiana tany. Izany dia nitandrina azy io tamin'ny toe-javatra tsara. Androany ireo taolam-paty ireo dia azo jerena tsara eo afovoan'ny arabe, na dia atokana ho an'ny fiarovana azy ireo aza.
Kafe antitra manan-tantara ao Trieste
I Trieste dia tanàna niavaka tamin'ny naha-toerana mpanao politika sy olo-malaza ara-kolontsaina azy. Izany no antony nisian'ny kafe manan-tantara maro izay Nahazo ny fomban'ireo avy any Wina ihany koa izy ireo, manolotra karazana kafe sy vatomamy isan-karazany. Ankehitriny dia mbola mahaliana an'ireo tonga ao an-tanàna ihany ireo kafe taloha ireo satria manan-tantara ny maro amin'izy ireo. Ny sasany amin'ireo izay tokony hitsidihantsika dia ny Café San Marcos, Café Torinese na Café Tomaseo.
Ao amin'ity tanàna ity dia misy tranombakoka marobe izay mety hahaliana. Ny tranombakoka sivika momba ny tantara sy ny zavakanto ary ny Ortho Lapidary manolotra anay arkeolojia eto an-toerana izay milaza amintsika ny tantaran'ny tanàna. Ho fanampin'izany, isika dia afaka mahita fanangonana kolontsaina hafa toa ny Maya na ny Egyptianina. Toy ny any amin'ny tanàna maro hafa dia misy tranom-bakoka History History, izay ahitantsika koa ny Civic Library sy ny Joyce Museum. Etsy ankilany, manana ny Museum of Art Oriental atsinanana natokana ho an'ny kolontsaina sinoa sy japoney isika na ny Revoltella Museum izay galeran'ny kanto ankehitriny.
Ity dia fitsidihana tena ilaina amin'ny lanjany ara-tantara. Risiera di San Sabba no hany toby fitanana nazia tany Italia ary ao no ahitantsika ny ankamaroan'ny zava-nitranga tao, fananan'ireo niharam-boina ary nianatra momba ny tantaran'ity toby ity. Teo amin'ny toerana nisy ny fandoroana ny faty, nisy tsangambato natsangana ho fahatsiarovana azy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Trieste
Ireo hotely 6 tsara indrindra any Copenhagen